Sawirro: MASUUL SARE OO MUXSIN AH AYAA AFUR LOO RIYAAQEY BAXSHEY (habeenka 12aad)
arlaadi June 18, 2016 No Comments
Iyadoo bisha barakeysan ay qaybteedi dhexe marayso ayaa waxaa caawa afurka masjidka lagu baxsho baxshey masuulkii ugu horeyey ee dadkiisa muslimiinta ah ifdhaar ugu deeqa.
Inkastoo inaanu magaciisa sheegno aanan ogolaansho u helin hadana sidaad sawirada ku aragtaan waxaa afurintani uu usoo wakiishey masuulkani mudane Malaaq C/Kariim Yusuf Cali Sh. Oo aad ugu farxay habsami u socodka afurinta masjidka Baydhabo ka socoto.
Hadaba Lajnada Afurinta iyo Saa’imiituba Masuulka waxay ugu duceeyeen Ilaahay ha cizeeyee Mulki aan guur guureynin iyo mansab umadiisa ugu adeego Aakhirana Janatul fardowsa ehel uga dhigo isaga iyo caa’iladiisaba Aamiin.
Ugu danbeyn walaalaha muxsiniinta ah waxaanu marwalba ka codsanaynaa iney dadaalkooda laba laabaan, waxaa soo batey saa’imiintii soo tiigsata Masjidka caawa oo ugu badaneyd tiradooda labada fadhi waxay kor u dhaafeen kun qof waxaanu deeq iyo gargaar saa’imiinta uga sugaynaa Allaah S/W iyo Muxsiniinta marwalba u heelan u gargaarida inta taagta daran.
Bashiir Maxamed Aadan